arjun timilsina(arjun timilsina) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
बजारमा देखिन थाल्यो आश्चर्यलाग्दा दृश्य: कसरी हुन्छ सुनभन्दा पित्तल महङ्गो ?
-अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । अहिले सेयरबजारमा धेरैले सोध्छन के अहिले लगानी गर्ने सही समय हो ? कतै अहिलेको लगानीबाट डूबिन्न ? डुब्नलाई तलाउ नै गहिरो हुनुपर्छ । अहिले सेयरबजारको तलाउ कति गहिरो होला ? सहज जबाफ हो अहिले घूँडा माथिको पानी अलिकति बढेर कम्मर कम्मरसम्म आएको मात्रै हो । पूरै घाँटी घाँटीसम्म आएको अवस्था भने होइन । यदी कम्मर...
राजनीतिक अन्यौलबीच कस्तो होला सेयर बजारको बाटो ?
राजनीति र सेयर बजार एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन्। यिनीहरुबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ। लगानीकर्ताले राजनीति र सेयर बजार दुवै हेर्छन् र हेर्न आवश्यक पनि छ। किनकि देशको नीति निर्माण तथा निर्णय राजनीतिक तह र तप्कामा हुने हुँदा भावी सरकार कस्तो बन्छ, अर्थ मन्त्रालयमा कस्तो व्यक्ति आउलान् र कस्तो नीति लेलान् भन्ने विषय प्रमुख...
कसरी हुन्छ सेयरमा फाइदा ? कस्ता कम्पनीमा गर्ने लगानी ?
विगत केही दिनदेखि तुवाँलोले ढाकेको आकाश कहिले खुल्छ ? त्यो मौसमविद्ले नै भन्न सक्लान्। तर सेयर बजारको आकाशमा के हुन्छ भनेर भन्न त्यत्ति सजिलो छैन। भनिहाले पनि त्यो अल्पकालका लागि भन्न धेरै मुस्किल छ। अहिले हरेक ब्रोकर हाउसमा लगानीकर्ताको कारोबार गर्ने शैली फेरिएको छ। पहिले डिस्प्लेमा झुम्नेहरु अहिले आफ्नै ल्यापटप र आइप्याडमा...
सेयर बजारमा वित्तीय शिक्षा : कस्तो हुनुपर्छ नियामकको भूमिका ?
अहिले सेयर बजारको चर्चा देशमा मात्रै सीमित नभएर विदेशका कुनाकाप्चामा चलेको पाइन्छ। देशभित्र चोकचोक, चियापसल र चौतारीमा चर्चा छ भने सेयरकै छ। ब्रोकर हाउसभित्र पनि बूढाबूढीदेखि काखे बच्चा च्यापेरसमेत सेयरका फर्म भरेको पाइन्छ। भनिन्छ, सेयर बजारको चर्चा दुईपल्ट धेरै हुन्छ। एकपल्ट निकै तल आएको बेला र अर्कोपल्ट निकै माथि पुगेको...
सेयर बजारमा कसरी हान्ने छक्का र चौका ?, यही हो ‘सेतो हात्ती’ बेचेर ‘जर्सी गाई’ किन्ने मौका
व्यापार, राजनीति र खेलमा सधैँ एउटै रणनीति र योजनाले काम गर्दैन। समय, परिस्थिति र प्रतिद्वन्द्वीहरुको चालअनुसार आफूले पनि पाइला चाल्न सक्नुपर्छ। सेयर बजार पनि एउटा बौद्धिक खेल नै हो। यहाँ पनि समयअनुसार चेसका गोटी फेर्न जान्नुपर्छ अर्थात् पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पोर्टफोलियो व्यवस्थापन भन्नाले धितोपत्रसम्बन्धी पर्याप्त...
केही दिनयता बाहिरी आकाश खुला र सफा भए पनि सेयरबजारको आकाशमा भने बादलका केही छिर्का देखिएका छन्। जसका कारण केही लगानीकर्ता अलमलमा परेकोजस्तो देखिन्छ। सेयर बजार भनेको एउटा समुद्र हो भन्ने कुरामा कुनै विबाद नहोला। विश्वका सेयर बजारहरुमा बेलाबेलामा समुद्रमा आउने ज्वारभाटा जसरी अनेक हल्ला चल्छन्। मानिसको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ...
सेयर बजारको बांगोटिंगो बाटो : कहिले हुन्छ हरियो, कहिले भइदिन्छ रातो
विज्ञानको चाल र गतिसम्बन्धी तेस्रो नियमअनुसार हरेक क्रियाको बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। अझ यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा हरेक वस्तुको तल–माथि गर्ने एउटा सामथ्र्य हुन्छ भन्ने नै हो। कुनै पनि वस्तु माथि जानलाई त्यहाँ शक्तिको आवश्यकता देखिन्छ। आकाशमा उडेको चंगालाई एकैछिन नियालेर हेर्यो भने त्यहाँ हावाको शक्ति देखिन्...
यस्तो छ तालुखुइले व्यापारी र चालीस चोरको कथा! लगानीकर्तालाई मिल्ला कस्तो शिक्षा ?
एक समयको कुरा हो। एकजना तालुखुइले व्यापारी थियो। एकपटक ऊ आफ्नो गोरु चराउन हिँड्दै थियो। अचानक ४० चोर आएर उसको गोरु लुटेर लगे। उसलाई ती चोरको ठाउँ–ठेगाना थाहा थियो। अर्को दिन आफ्नो गधा लिएर चोरकहाँ पुग्यो र भन्यो ‘मेरो गधाले त गोबरको सट्टा एक हजार असर्फी दिन्छ।’ चोरहरुले ऊमाथि विश्वास गरे। त्यसपछि तालुखुइले व्यापारी आफ्नो लुटिएको...
सेयर बजारमा लगानी, कसरी हुन सक्ला हीराको खानी ?
यो अठारौँ शताब्दीका एक हीरा व्यापारीको कथा हो। केही मान्छेले हीरा रहेको आशंका गरेको ठाउँ देखाइदिएपछि उनले आफ्ना सारा स्रोत र क्षमता लगाएर जमिन खन्न सुरु गरेछन्। महिनौँसम्म उनले खने। खन्दा–खन्दा एकातिर खाल्डो पर्दै गयो भने अर्काेतिर खनेर फालेको माटोले डाँडो बन्दै गयो। लामो समय ती व्यापारीले कोसिस गरे तर हीरा भेटिने कुनै लक्षण...
ऋण गरी सेयरमा लगानी गर्दा कति हुन्छ फाइदा ? अध्ययन गरी पैसा खन्याउनु नै काइदा
सेयर बजारमा दैनिक नयाँ–नयाँ रेकर्ड कायम भएसँगै अहिले चिया पसलदेखि सार्वजनिक यातायातसम्म र देशका कुना–कुनादेखि विदेशमा रहेका नेपालीसम्म नेपालको सेयर बजारको चर्चा गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि अहिले सेयर बजार बढेको विषयमा व्यापक चर्चा हुन थालेका छन्। कतिपयले त बढ्दो बजारमा मैले अलि कति ऋण गरेर सेयरमा लगानी गर्दा कसो होला...
सेयर बजार हुँदै गर्दा बुम, कसरी होला नाफा बढी अनि घाटा कम ?
सेयर बजार होस वा अन्य व्यापार सबैको एउटै उद्देश्य हुन्छ– ‘नाफा कसरी अधिकतम गर्ने ?’ व्यापारको मुख्य उद्देश्य नै नाफा कमाउने भएपछि यसो हुनु पनि स्वाभाबिक हो। सेयर बजार त झनै बढीभन्दा बढी नाफा आशा गरेको क्षेत्र हो। जहाँ दसगुणा, बीसगुणा र सयगुणासम्म नाफा हुन्छ। यहाँनेर प्रश्न गर्नुहोला– के सेयर बजारबाट सयगुणासम्म नाफा हुन्छ त? के छ...
सेयर बजारमा के-के हुन्छन् गल्ती ? कसरी सुरक्षित गर्ने आफ्नो ब्रिफकेशको खल्ती ?
-अर्जुन तिमिल्सिना एउटा कालजायी नेपाली आधुनिक गीत छ-'गल्ती हजार हुन्छ यहाँ होस हराएको बेला ।' गोपाल योञ्जनको शब्दसंगीतमा नारायण गोपालले गाएको यो गीतको भाव र अर्थ कहीँ न कहीँ सेयर बजारमा पनि मिल्छ । सायद सेयर बजार एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ एउटा न एउटा गल्ती नगरेको र पछुतो नभएको कोही छैन र हुन्न पनि । कसैलाई उच्च मूल्यमा ...
-अर्जुन तिमिल्सिना संसारमा सेयर बजार एउटा यस्तो ठाउँ हो, जहाँ लाखौं लगानीकर्ताहरुले करोडौं कमाउने सपना बुनेका हुन्छन् । मनमनै एउटा सपनाको घर बनाएका हुन्छन् । घर काठको होस् अथवा कागजको त्यो अलग कुरा हो, तर सपनीमा बनिराखेको हुन्छ । नेपालमा भर्खर भर्खर बिकास हुँदै गएको शेयर बजारको बारेमा धेरैले धेरै अनुमान लगाएका हुन्छन् । कोही...
शेयर बजारमा छानौ कम्पनी ‘अब्बल’, लगानी हुन्छ अवश्य ‘डबल’ !
-अर्जुन तिमिल्सिना शेयर बजारको तराजूमा हरहमेशा दुईवटा चिज हुन्छ । जसरी एउटा तराजूमा दुई पल्ला हुन्छ, त्यसैगरी सेयर लगानीमा पनि दुई चिज, जुन छुट्याउनै नसकिने हुन्छन् । ती हुन् एउटा पल्लामा रिस्क(जोखिम) र आर्को पल्लामा रिटर्न(फाइदा) । तपाईंले गरेको लगानीमा नाफा भयो भन्नुको अर्थ रिटर्नको पल्ला बढी हुनु हो । यो दुनियाँमा...
सुन–चाँदीको भाउ बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
पुँजीवृद्धि योजना : महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा सेयरधनीबाट लगानीको थप ५०% रकम माग
‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशक’ घोषणा सकारात्मक : परिसंघ